Shirkadaha Dharka Difaaca iyo Warshadaha - Soosaarayaasha Dharka Difaaca ee Shiinaha
Clothi ilaalin ah
Waxqabadka Baridaha Qaabka imtixaanka, booska muunad qaadida iyo kala soocida waxqabadka carqaladeynta ee dharka ayaa lagu muujiyey Jadwalka 1. Ka fiiri shaxda hoose meelaha muhiimka ah ee ku habboon go'doominka. Xakameynta dareeraha ah waxaa loola jeedaa dharka ilaalinta caafimaadka waa inay awood u leedahay inay ka hortagto galitaanka biyaha, dhiigga, aalkolada iyo cabitaannada kale, oo leh in ka badan 4 heerar oo biyo-la'aan ah, si looga fogaado fayraska ay qaadaan dhiigga bukaanka, dareeraha jirka iyo dheecaanka kale ee faafa cudurka shaqaalaha caafimaadka. ...
Tuugada la tuuri karo
Faahfaahinta dharka Ilaalinta Nooca: Dharka Lagu Fari Karo Goobta Asal ahaan: FuJian, Shiinaha Cabbirka: XS / S / M / L / XL / 2XL Magaca sheyga: Codsiga Dharka Ilaalinta ee loo adeegsaday kala-baxa taranka, go'doominta guud, boodhka iyo hawo-ka-shaqeynta, shaqada bannaanka, faafa bulshada. kahortagga, jeermiska dugsiga, iwm. Habka difaaca ugu wanaagsan waxaa lagu dabbaqayaa beeraha xoolaha, beeraha digaagga, shaqada ka hortagga faafa, iyo shaqada bannaanka. Nooca & Isticmaalka meelaha 1) Nooc aan jeermis lahayn ...
Faahfaahinta dharka Difaaca Nooca: Dharka Lagu Fari Karo Goobta Asal ahaan: FuJian, China Cabbirka: XS / S / M / L / XL / 2XL Magaca sheyga: Dharka Awooda Agabka Sahayda Kartida: 3000 Dhar / Gogoc ah Maalintii Tilmaamaha dharka Difaaca 1. Takhaluska kiliinikada. kiiska ilaalinta ayaa laga sameeyay alaab tayo sare leh oo walxo leh. Waxay leedahay shaqada ka-hortagga fayraska, neefsashada, ka-hortagga osmosis, ka-hortagga biyuhu, waana mid aan lahayn wax-aan-lahayn. 2. Qalabka difaaca kaydinta lagu tuuri karo waa comf ...
Awoodda Sahayda Kartida Alaabada: 3000 Jeer / Xabbado Maalintii Dharka Difaaca Tilmaamaha 1. Dharka difaaca kaydinta ee la tuuro waxaa laga sameeyay alaab tayo sare leh. Waxay leedahay shaqada ka-hortagga fayraska, neefsashada, ka-hortagga osmosis, ka-hortagga biyuhu, waana mid aan lahayn wax-aan-lahayn. 2. Dharka difaaca ee la tuuri karo ayaa ku habboon in la xidho labadiisa biyood ee astaamaha lagu garto iyo astaamaha la neefsanayo. 3. Xarigga xarigga kuleylka-kululeeyaha wuxuu sameeyaa heerka ugu sarreeya ee ilaalinta. 4. Way dheertahay ...
Coveragells Water Biyo
Waqtiga Hogaanka: Tirada (Goobaha) 1 - 10000> 10000 Est. Waqti (maalmo) 7 In laga wada hadlo galmada Astaamaha dharka 1. Qalabka difaaca kaydinta ee lagu faafiyo waxa laga sameeyay walxo tayo sareysa leh. Waxay leedahay shaqada ka-hortagga fayraska, neefsashada, ka-hortagga osmosis, ka-hortagga biyuhu, waana mid aan lahayn wax-aan-lahayn. 2. Dharka difaaca ee la tuuri karo ayaa ku habboon in la xidho labadiisa biyood ee astaamaha lagu garto iyo astaamaha la neefsanayo. 3. Heat-sealing sheyga xariga xargaha ma ...
Tilmaamaha dharka dharka 1. Xarka isku tolidda tolida ayaa sii wadaysa waxqabadka iska caabbinta dareeraha ah 2. Xudduudka xadka dabacsan 3. Xirmooyinka xargaha ama xargaha xargaha waa ikhtiyaar u leh 4. Qaybta dabacsan iyo galka canqowga 5. Koolo ballaaran oo is-kala-qaadid iyo debecsan inta lagu jiro isticmaalka 6. Wax qayb ah sii deyn 7. Ergonomic 3-gogo 'hood 8. Cidhiidhi dheellitir leh oo loogu talagalay taam ahaansho 9. Meel isku wareeg ah oo Fiican Codsi Waxaa loo isticmaalaa ku-tallaalka jeermiska, go'doominta guud, boodhka iyo hawo-ka-shaqeynta, bannaanka, shaqada bulshada ka hor ...
Tilmaamaha dharka dharka 1. Qalabka difaaca kaydinta lagu tuuri karo waxaa laga sameeyay waxyaabo tayo sare leh oo ka kooban. Waxay leedahay shaqada ka-hortagga fayraska, neefsashada, ka-hortagga osmosis, ka-hortagga biyuhu, waana mid aan lahayn wax-aan-lahayn. 2. Dharka difaaca ee la tuuri karo ayaa ku habboon in la xidho labadiisa biyood ee astaamaha lagu garto iyo astaamaha la neefsanayo. 3. Xarigga xarigga kuleylka-kululeeyaha wuxuu sameeyaa heerka ugu sarreeya ee ilaalinta. 4. shelf dheer-nolosha iyo fududahay in la dhaafo, waxay ka dhigeysaa mid jawi saaxiibtinimo. & nbs ...
Faahfaahinta dharka Difaaca Nooca: Dharka Lagu Fari Karo Goobta Asal ahaan: FuJian, China Cabbirka: XS / S / M / L / XL / 2XL Magaca sheyga: Dharka Awooda Agabka Sahayda Kartida: 3000 Doogga / Hal xabbo Maalintii Codsiga Loogu Adeegsaday jeermiska faafa, guud ahaan go'doominta, boodhka iyo hawo-mareenka, shaqada bannaanka, ka hortagga faafidda bulshada, ku-faafitaanka dugsiga, iwm. Habka difaaca ugu wanaagsan waxaa laga dalbadaa beeraha xoolaha, beeraha digaagga, shaqada ka hortagga faafa, iyo werwerka dibedda ...
Sidee loo isticmaalaa dharka difaaca si sax ah? Isticmaalka dharka kahortagga ayaa si dhow ula xidhiidha nolosheena iyo caafimaadkeenna, sidaa darteed waa lama huraan in la xusho dharka ilaalinta oo buuxiyo shuruudaha tayada. Waqtiga xaadirka ah, magacyada ugu caansan ee caan ah waa Dupont of the United States, the United States Lakeland, 3M, Sperian, iyo wixii la mid ah. Ka dib marka aad hesho dharka ilaalinta, isticmaalka saxda ah ayaa waliba ka sii muhiimsan. Muuqaalka Looga Baahan Yahay Naqshadeynta Dharka ilaalinta ahi waa inuu ahaadaa mid qallalan, nadiif ah oo caariyaysi ah ...
Dharka Ilaalinta Shucaaca
Tilmaamaha dharka dharka 1. Qalabka difaaca kaydinta lagu tuuri karo waxaa laga sameeyay waxyaabo tayo sare leh oo ka kooban. Waxay leedahay shaqada ka-hortagga fayraska, neefsashada, ka-hortagga osmosis, ka-hortagga biyuhu, waana mid aan lahayn wax-aan-lahayn. 2. Dharka difaaca ee la tuuri karo ayaa ku habboon in la xidho labadiisa biyood ee astaamaha lagu garto iyo astaamaha la neefsanayo. 3. Xarigga xarigga kuleylka-kululeeyaha wuxuu sameeyaa heerka ugu sarreeya ee ilaalinta. 4. shelf dheer-nolosha iyo fududahay in la dhaafo, waxay ka dhigeysaa mid jawi saaxiibtinimo. Codsi ...
Dharka Kahortagga Kiimikada